Ny lalao mpihazakazaka tsy misy farany mahadomelina indrindra ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ny lalao mpihazakazaka tsy misy farany mahadomelina indrindra ho an'ny iPhone
Alex Ruiz | | Lalao IPhone
Izy io dia iray amin'ireo sokajy lalao malaza indrindra misintona sy milalao amin'ny fitaovantsika, ny mpihazakazaka tsy misy farany, mifampiraharaha amin'ny ankapobeny izy ireo mihazakazaka mankamin'ny fahafatesanaRaha ny fahitana azy dia tsy misy farany ireo lalao ireo ary ny fialambolin'izy ireo dia ny fiezahana hanatratra lavitra araka izay tratra, ary manandrana maka ny isa azo tratrarina indrindra ihany koa. Izy ireo no lalao mampiankin-doha indrindra ho an'ny iPhone, satria miaraka amin'ny namantsika isika dia afaka mizara ny halavirana farany vitantsika, ny isa farany azontsika ary azo antoka ny tolona.
Amin'ny ankapobeny dia io no fahombiazan'ireo lalao ireo zarao ary andramo ny mikapoka ny valiny azo ho an'ny namantsika. Ny fahombiazan'ny lalao vao tsy ela akory izay Flappy Bird, efa nesorina tao amin'ny App Store, dia porofon'izany. Saingy misy maro hafa tena malaza sy mety tsy fantatry ny mpamaky antsika na nanandrana azy ireo ho antsika. Ireo dia ny lalao nofidianay tsara indrindra amin'ity sokajy ity:
2 Minion maika
3 Jetpack fifaliana
4 Elatra kely
5 Safari Ski
6 Fanjonoana maneso
Ny tohin'ny lalao Temple Temple tena mahomby, izay samy manangona fampidinana an-tapitrisany manerana an'izao tontolo izao. Isika dia mametraka ny tenantsika ao amin'ny kiraron'ireo mpikaroka isan-karazany izay azontsika isafidianana sy ny tsirairay amin'ny fahaizany samy hafa. Ny tanjona dia mandosira ny tempoly ary miezaha tsy ho tratran'ilay bibidia manenjika antsika izany. Hiezaka ny handresy ny andian-fandrika rehetra, ny zotra zip, ny sarety ary ny tery ny arabe izahay, ary hanandrana manangona ny isan'ny farantsakely faratampony hividianana herinaratra izay hanampy antsika handeha lavitra.
Lalao Gameloft momba ny olom-bitsy amin'ilay sarimihetsika Dispicable Me Gru. Hametraka ny tenantsika eo amin'ny kiraron'ny iray amin'ireo zavaboary ireo isika, ny Minion, mba hamakivaky ireo sehatra samihafa amin'ny sarimihetsika ary hisorohana ireo fandrika sy sakana tsy misy farany manangona akondro. Tsy maintsy resintsika mihitsy aza ireo olon-dratsy amin'ilay sarimihetsika izay hiseho indraindray. Arakaraka ny ananantsika namana Facebook sy Game Center Amin'ity lalao ity dia hahazo isa bebe kokoa isika handresena azy ireo.
Lalao mahafinaritra iray hafa amin'ity sokajy ity, hiatrika an'i Barry isika, toetra manana kitapom-batsy izay mandrisika azy amin'ny fikasihan'ny rantsan-tanantsika. Ny tanjon'ity lalao ity dia ny mandeha lavitra araka izay tratra ary mandalo andiana fitsapana izay hatolotra antsika. Afaka mandray hafa ihany koa isika fiara ary na dia dragona aza hanamorana ny dia. Zava-baovao iray hafa entin'ity lalao ity ny kodiarana roulette isaky ny lalao bonus amin'ny endrika vola madinika na vintana faharoa.
Raha tsy nipoitra ara-potoana ianao talohan'ny nakana azy Flappy Bird, Ity dia lalao teo aloha tany am-boalohany misy ny fandresena ambaratonga amin'ny alàlan'ny fanosehana ilay vorona kely amin'ny alàlan'ny haitao ho toy ny slide mitady hahazo propulsion sy hafainganam-pandeha bebe kokoa. Ahitana a mihazakazaka amin'ny masoandro Alohan'ny maizina Ny fahasarotan'ireo fitsapana izay tsy maintsy resentsika amin'ny alàlan'ny nosy dia hitombo miampy ny hafainganan'ny masoandro.
Elaela io iray amin'ireo fangatahana fandoavam-bola be alaina indrindra Amin'ny alàlan'ny App Store manerantany, ny vidiny ambany (0,89 €) sy ny filalaovany dia mahatonga ity lalao ity ho iray amin'ireo lehibe amin'ny sokajy. Izahay dia mitazona mpanao ski amin'ny tontolo feno biby, ary izaho dia hanome azy ireo anay ary hanampy antsika hanatratra izay azo atao mba hisorohana ny fisintomana azy oram-panala. Tsy maintsy mandalo andiam-pitsapana maromaro ihany koa isika izay misy fantsakana miaraka amin'ilay toetra amam-panahy.
Raha tsy fantatrao io dia azo antoka fa hahagaga anao, tsy maintsy tonga any amin'ny lalina indrindra azo atao miaraka amin'ny faritry ny hazandrano manjono anay, raha mitrandraka trondro tsy misy fiafarana sy zavamananaina anaty rano efatra izahay. Rehefa tsy afaka misoroka azy ireo intsony isika ary manjono ny iray, dia hanomboka haka ilay tsipika ny tsorakazo ary rehefa izany dia mila izany isika manangona ny isa lehibe indrindra ny trondro fisorohana ny jellyfish izay hampihena ny isa. Rehefa tonga eny ambonin'ny tany isika dia hanidina amin'ny alàlan'ny rivotra ny jono rehetra ary tsy maintsy tifirintsika amin'ny fitaovam-piadiantsika hahazoana ny isa ambony indrindra. Amin'ity vola ity dia hahazo tsipika lava kokoa, tombony ary fitaovam-piadiana mahery vaika kokoa izahay tifiro ny trondro.
Hatreto dia ireo lalao noheverinay ho miavaka indrindra amin'ny fihazakazahana tsy misy farany, saingy ao amin'ny App Store dia misy maro hafa ary azo antoka fa mahaliana kokoa ho anao, izay nanantona anao teo alohan'ny iPhone. Iza amin'ireo no heverinao fa mendrika an'io sokajy io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ny lalao mpihazakazaka tsy misy farany mahadomelina indrindra ho an'ny iPhone
Thylacine dia hoy izy:
Mamaly an'i Tilacino
alexander azo antoka dia hoy izy:
Valiny tamin'i Alejandro Segura
TouchBar: mampihetsika sy mampiato ny toggle avy amin'ny tsipika fanefana (Cydia)